Sababta dhabta ah uu Pogba kaga tagayo Manchester United oo la ogaaday – Gool FM
(Manchester) 19 Feb 2020. Paul Pogba ayaa doonaya inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee Manchester United si uu u ciyaaro tartanka Champions League iyo in uu ku guuleysto horyaal, sida uu sheegay walaalkiis.
Xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka 2018 ee reer France Pogba, kaasoo aan u ciyaarin kooxdiisa Man United tan iyo Boxing Day-ga kaddib dhaawac ka soo gaaray dhanka canqowga ah, ayaa la filayaa inuu xagaagan ka tago garoonka Old Trafford.
26-sano jirkan ayaa kusoo laabtay Manchester United, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay Juventus sanadkii 2016, laakiin waxaa jiray jahwareer ku aadan mustaqbalkiisa labadii sano ee la soo dhaafay.
Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu u dhaqaaqo midkood Italy ama Spain xagaagan, walaalkiis Mathias ayaa sheegay inuu doonayo ka ciyaarista tartanka Champions League isla markaana uu ku guuleysto koobab. Isagoo lahadlayay El Chiringuito TV, Mathias Pogba wuxuu yiri:
“Qof walba wuu ogyahay in Paul doonayo inuu ka tago Manchester United, wuxuu doonayaa inuu ka ciyaaro tartanka Champions League iyo inuu ku guuleysto koobab”.
“Waan ognahay in dhaman arrimahaas aysan ku suurtogali doonin Man United, waan arki doona waxa dhici doona”.
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo war naxdin leh ee ku saabsan Rashford u sheegay taageerayaasha Man Utd